Mayelana NATHI - Anping Shiheng Medical Instruments Co., Ltd.
Umkhiqizo wethuidlula amazinga we-ail wezinga lomhlaba wonke nezokuphepha, kufaka phakathi i-CE ne-FDA.Ikhwalithi ephezulu nemikhiqizo ejwayelekile ithola ukudunyiswa okungaguquguquki kwamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe.Siphinde sibe ngabakhiqizi be-OEM bomkhiqizo wamazwe omhlaba odumile wamazwe omhlaba. Kuyo yonke le minyaka, imikhiqizo yethu ithunyelwa eYurophu, eMelika, e-Afrika, eningizimu-mpumalanga ye-Asia nakwamanye amazwe.
Ithimba lethu lochwepheshe isebenza ngobuqotho kumthengi ngamunye.Ukuthembela kwakho ukuqashelwa okukhulu kwisevisi yethu.Sizoqhubeka nokwethula imikhiqizo emisha edayisekayo ngokuya ngemfuno yemakethe ethembele kwimikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi siqaphele ukubambisana kwe-win-win namakhasimende.
iyinkampani ekhethekile yezinsizakalo zezokwelapha nezemidlalo ezithengisa imishini yezokwelapha yokuvuselela nokuqina kwezemidlalo. Le nkampani inefektri yayo, ehlanganisa indawo engaphezulu kwamamitha-skwele ayi-12000, enama-workshops amane wokusebenza ochwepheshe kanye nabasebenzi abangaphezu kuka-200 abanolwazi lobuchwepheshe. futhi bahola abahlinzeki bezinsizakalo zamathambo enyakatho yeChina.
Sizibophezele ekuthuthukiseni, ekukhiqizeni nasekuthengiseni amathambo wamathambo, i-splint kanye nokuvuselelwa komkhiqizo njll Ngenqubo yokuvuselela ukwakheka kwethu, sizokhiqiza yonke imininingwane yomqondo wokulawulwa kwekhwalithi yethu: Ikhwalithi nobuqotho buza kuqala. okuphezulu kakhulu.
Usizo lwabenza imisenenzi R & D iqembu Ukuxhumana nobuchwepheshe besikhathi eside nezazi zesibhedlela ezinegunya kuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu iletha ukusebenza okuphezulu nokunethezeka emzimbeni womuntu.Imikhiqizo yethu ikakhulukazi ifaka uchungechunge oluningi: ukwesekwa kwentamo, ukwesekwa kwehlombe, ukwesekwa okhalweni, ukuxhaswa kwamadolo, ukwesekwa kweqakala, insika yokuqala yosizo imbenge nezinduku njll.
1. Q: Ingabe uyi-factoty noma inkampani yokuhweba?
A: Singabantu ifektri, onguchwepheshe ukukhiqizwa kwamalunga brace futhi ezemidlalo umkaki, besineminyaka engu-15.
singaqinisekisa ukuthi intengo yethu ngesandla sokuqala, ikhwalithi ephezulu nentengo yokuncintisana.
2. Q: Ngingawufaka kanjani umyalo?
A: Ungaxhumana nanoma yimuphi umuntu wethu wokuthengisa nge-oda. Sicela unikeze imininingwane yezidingo zakho icace ngangokunokwenzeka. Ngakho-ke singakuthumela okuhlinzekwayo okokuqala.
Ngokuklama noma ukuxoxa ngokuqhubekayo, kungcono ukuxhumana nathi nge-Skype, TradeManger noma i-Wechat noma i-QQ noma i-WhatsApp noma ezinye izindlela ezisheshayo, uma kwenzeka kukhona ukubambezeleka.
3. Q: Ngingayithola nini intengo?
A: Ngokuvamile sicaphuna kungakapheli amahora angama-24 ngemuva kokuthola umbuzo wakho.
4. Q: Ungakwazi yini ukwenza umklamo wethu ne-OEM ODM?
A: Yebo. Sineqembu eliqeqeshiwe elinolwazi olunothile ekwakhiweni kwebhokisi lesipho nokwenziwa kwezinto. Sitshele nje imibono yakho futhi sizokusiza ukufeza imibono yakho emabhokisini amahle.
5. Q: Ngingalindela isikhathi esingakanani ukuthola isampula?
A: Ngemuva kokuthi ukhokhe isampula bese usithumela amafayela aqinisekisiwe, amasampula azobe esekulungele ukulethwa ezinsukwini eziyi-1-3. Amasampula azothunyelwa kuwe nge-express futhi afike ezinsukwini ezingama-3-5. Singanikela ngesampula mahhala kodwa ungakhokhi izindleko zezimpahla.
6. Q: Kuthiwani ngesikhathi sokuhola sokukhiqiza ngobuningi?
A: Ngokwethembeka, kuya ngobuningi be-oda nesikhathi sonyaka obeka ngaso i-oda. I-Alway 10-30 days ngokususelwa ku-oda ejwayelekile.
7. Q: Iyini imigomo yakho yokulethwa?
A: Samukela i-EXW, i-FOB, i-CFR, i-ClF, njll. Ungakhetha eyodwa okuyizindleko ezilula kakhulu ezisebenza kuwe.
8 Umbuzo:. Iyiphi indlela yokukhokha?
A1) Samukela i-Paypal, T, Wester Union, L / C, D / A, D / P, MoneyGram, njll.
2) ODM, OEM oda, 30% kusengaphambili, ibhalansi ngaphambi mpahla.
9. Q: Ifekthri yakho ilayishwe kuphi? Ngingavakashela kanjani lapho?
A: Imboni yethu ilayishwe e-Anping County, esifundazweni sase-Hebei e-China, ngase-Beijing
10. Q: Ifektri yakho ibeka kanjani maqondana nokulawulwa kwekhwalithi?
Ngaphambi kokuthunyelwa, abasebenzi bethu beShiheng Medical bazohlola ama-1pcs wekhwalithi nge-1pcs.Quality isiko lethu.
Futhi singenza okulandelayo
Ifektri 1.Real nge imishini nabasebenzi abanamakhono
Abasebenzi abanolwazi kwezokuhwebelana namanye amazwe, Insizakalo esezingeni eliphakeme
3.We kungaba ukwamukela oda elincane futhi OEM / ODM oda
4.I-logo eyenziwe ngokwezifiso, ilebula lokuwasha, iphakethe, ikhadi lombala, ukwamukela ibhokisi lombala.
5. Professional umklami kanye nabasebenzi abanamakhono angakhiqiza umkhiqizo wakho ngokukhethekile.
Ikhwalithi yezinga eliphezulu, ene-CE / FDA ne-ISO certification
Intengo yokuncintisana nokulethwa okusheshayo, yonke indlela yokuthumela iyamukelwa
Indlela yokukhokha e-Vary, i-LC, i-TT, i-Western Union, i-Money Gram ne-paypal
I-9.Iwaranti yesikhathi eside nokuseva kokuthengisa ngemuva
10. Kuyintando yethu ukuthi sikhule sibe bakhulu namakhasimende ethu sindawonye